तपाईं कुरियरको कुन तरिकाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
हामी अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरु र बेलायतका ग्राहकहरु, रोयल मेल र DPD का लागि रोयल मेल प्रयोग गर्दछौं।
मैले ट्र्याकिंग लिंक प्राप्त गरेन, मेरो पार्सल कहाँ छ?
तपाईंले तपाईंको शिपिंग कन्फर्मेसन ईमेलमा ट्र्याकिंग नम्बर प्राप्त गर्नुपर्‍यो। तपाईंले रोज्नु भएको कुरियरको कुन विधिमा निर्भर गर्दै, तपाईं यसमा यो नम्बर प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ
DPD ट्र्याकिंग लिंक - https://www.dpd.co.uk/service/
शाही मेल ट्र्याकिंग लिंक - https://www.royalmail.com/track-your-item#/
मैले के गर्नुपर्छ यदि मेरो वस्तु अहिलेसम्म वितरित भएको छैन?
तपाईको अनुमानित डेलिभरी मिति तपाईको अर्डर कन्फर्मेसन ईमेलमा छ - कृपया तपाईको अर्डर अघि आउन यस मिति सम्म अनुमति दिनुहोस्।
तपाईं तपाईंको शिपिंग कन्फर्मेसन ईमेलमा ट्र्याकिंग लिंक क्लिक गरेर तपाईंको अर्डरमा नवीनतम अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं 'मेरो खाता' मा लगईन गर्न र 'यो अर्डर ट्र्याक' क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको ट्र्याकि link लि your्क तपाईंको अर्डर को स्थिति मा अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ।
यदि तपाईंको अनुमानित डेलिभरी मिति सकिसक्यो र तपाईंले तपाईंको अर्डर प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कृपया यससँग सम्पर्कमा रहनुहोस् বিক্রয়@sarmsstore.co.uk
के म मेरो अर्डरको वितरणलाई ट्र्याक गर्न सक्छु?
यदि तपाईंको अर्डर ट्र्याकेबल सेवा प्रयोग गरी तपाईंलाई पठाइएको छ भने, तपाईं आफ्नो यात्रा पछ्याउन सक्नुहुनेछ। एक पटक तपाईंको अर्डर आउँदैछ भने तपाईं हाम्रो गोदामबाट एक शिपिaकन्फर्मेसन ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ; अप टु डेट ट्र्याकिंग हेर्नका लागि केवल यस ईमेलमा तपाईंको ट्र्याकिंग लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
के म मेरो पार्सल अर्को ठेगानामा पुनःनिर्देशित गर्न सक्छु?
तपाईंको सुरक्षाको लागि हामी तपाईंको अर्डरमा पठाइएको ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्षम छैनौं। चिन्ता नलिनुहोस् - यदि तपाईं डिलिभरीको लागि प्रयास गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्न भने हाम्रो डेलिभरी पार्टनरले कसरी पुन: वितरणको व्यवस्था गर्ने भनेर सल्लाह दिन्छ वा जहाँ तपाईं आफ्नो पार्सल लिन सक्नुहुन्छ।
मेरो अर्डर आउँदा म भित्र नबसेमा के हुन्छ?
कसैलाई भित्र पार्नु आवश्यक छ जब तपाईंको पार्सल डेलिभर हुने कारण हामीलाई हस्ताक्षरको आवश्यक पर्न सक्छ। यद्यपि यो चिन्ता नलिनुहोस् यदि यो सम्भव भएन भने हाम्रो वितरण साथीले प्राय: एक पटक भन्दा बढी डेलिभर गर्ने प्रयास गर्दछ।
वैकल्पिक रूपमा उनीहरूले कार्ड छाडेर पुष्टि गर्नेछ कि उनीहरूले कि त यो छिमेकीसँग छोडेको छ, सुरक्षित ठाउँमा छोडेको छ, जब तिनीहरूले पुन: पठाउने प्रयास गर्ने छन् वा तपाईंलाई कसरी संकलन गर्ने भन्ने बारे विवरणहरू दिन्छन्।
मेरो अर्डर स्थिति "अपूर्ण" भन्छ किन यो अहिलेसम्म पठाइएको छैन?
यदि तपाईंको अर्डरको स्थिति 'अधुरो' को रूपमा देखाइएको छ भने, यसको मतलब यो हो कि हामी तपाईंको अर्डरलाई सँगै पठाउनको लागि तयार हुन व्यस्त छौं।
व्यस्त समयमा, यो स्थिति सामान्य भन्दा लामो तपाईंको अर्डरमा देखा पर्दछ। तपाईंको अनुमानित डेलिभरी मिति तपाईंको अर्डर कन्फर्मेसन ईमेलमा छ र तपाईंको अर्डर प्याकेज गर्न हामीलाई लिने समय समावेश गर्दछ।
तपाईंले अर्को ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ जब हामी तपाईंलाई अर्डर पठाउँदछौं, जसमा ट्र्याकिंग लिंक समावेश हुन्छ यदि तपाईंको अर्डर ट्र्याकेबल डेलिभरी सेवाहरूको साथ पठाईएको छ।
तपाईंको प्याकेजि What कस्तो देखिन्छ?
हामी सुनिश्चित गर्छौं कि हाम्रो सबै प्याकेजिंग विवेकी छ, कुनै स्टिकरको नाममा कम्पनीको नाम र सादा प्याकेजि st छैन।
के म मेरो अर्डर राखे पछि यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छु?
हामी तपाईंको अर्डर प्याक गर्न वास्तवमै छिटो छौं जसको अर्थ यो हो कि हामी तपाईंको अर्डर एकपटक गरे पछि यो परिवर्तन गर्न असक्षम हुनेछौं। यसले डेलिभरी विकल्प, डेलिभरी ठेगाना वा क्रममा उत्पादनहरू परिवर्तन गर्दछ।
मैले दुर्घटनाबाट केहि अर्डर गरेको छु, म के गर्ने?
जस्तो कि तपाईले यो अर्डर गरे पछि हामी अर्डरलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, र तपाईले चाहानु नभएको चीज प्राप्त गर्नुहुन्छ। कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस् বিক্রয়@sarmsstore.co.uk। तपाईं हामीलाई फिर्ता पठाउन सक्नुहुनेछ, र हामी फिर्ता हुनेछ वा अर्डर हुने बित्तिकै यो हाम्रो गोदाममा फिर्ता आउनेछ।
कृपया तपाइँको पार्सलमा नोट राख्नुहोस् हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाइँले अर्डर गलत ठाउँमा राख्नु भएको छ जब तपाइँ यसलाई फिर्ता पठाउनुहुन्छ। हुलाकको प्रमाणको लागि सोध्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यदि हामीले त्यसलाई पछि हेर्नु पर्छ भने तपाईंले सुरक्षित राख्नु भएको छ।
मेरो अर्डरमा गलत वस्तु छ, म के गर्ने?
हामी गलत आईटमहरूको साथ कुनै पनि मुद्दाहरूको क्रमबद्ध गर्न चाहन्छौं।
यदि तपाईले प्राप्त गर्नुभएको कुनै एक वस्तु तपाईले अर्डर गर्नुभएको छैन भने, कृपया हामीलाई सुचित गर्नुहोस् বিক্রয়@sarmsstore.co.uk, र हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो तपाईंको सहि वस्तु पठाउँनेछौं। हामी तपाईंलाई सोध्छौं कि तपाईं हामीलाई गलत चीज फिर्ता पठाउनुहोस्।
कृपया तपाइँको पार्सलमा नोट राख्नुहोस् हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यो गलत छ जब तपाइँ यसलाई फिर्ता पठाउनुहुन्छ। हुलाकको प्रमाणको लागि सोध्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यदि हामीले त्यसलाई पछि हेर्नु पर्छ भने तपाईंले सुरक्षित राख्नु भएको छ।
म मेरो अर्डरमा एक वस्तु हराइरहेको छु, म के गर्ने?
यदि एक वस्तु हराइरहेको छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् sales@sarmsstore.co.uk मा हामीलाई अर्डर नम्बर र हराएको वस्तुको नामको साथ। हामी तपाईको लागि जति सक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्नेछौं।
उत्पादन र स्टक
वेबसाइटमा आईटमहरू कसरी खोजी गर्न सक्छु?
के तपाइँलाई थाहा छ तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, यसलाई प्रत्येक पृष्ठको शीर्षमा खोज बाकसमा टाइप गर्नुहोस् र म्याग्निफाइ glass ग्लासमा क्लिक गर्नुहोस्।
के तपाइँ मलाई तपाइँको उत्पादनहरु मा अधिक जानकारी दिन सक्नुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई हाम्रो सबै उत्पादनहरूको बारेमा सकेसम्म उपयोगी जानकारी दिन प्रयास गर्दछौं:
तेस्रो-पार्टी स्रोतबाट विश्लेषणको प्रमाणपत्रहरू।
उत्पादको सामान्य विवरण
कसरी उत्पादन प्रयोग गर्ने - चक्र लम्बाई, पुरुष र महिलाहरूको लागि डोज, र उत्पाद आधा जीवन समावेश गर्दछ।
के संग यसलाई स्ट्याक गर्न
यदि तपाईंलाई यस उत्पादनको साथ PCT चाहिन्छ भने।
के तपाई बढि उत्पादनहरु पाउनुहुन्छ?
हामी सकेसम्म धेरै पटक नयाँ उत्पादहरूसँग हाम्रो दायरा अद्यावधिक गर्न कोशिस गर्दैछौं जसको अर्थ हामी नयाँ उत्पादनहरू परिपूर्ण बनाउन धेरै समय खर्च गर्छौं, त्यसैले तपाईंको आँखा खोलियो!
के तपाईं थोक खरीदको लागि थोक छूट प्रदान गर्नुहुन्छ?
हाम्रो वितरक बॉडीबिल्ड ल्याबहरू थोक बिक्रेताको लागि खोजी गर्दैछन्। कृपया हेर्नुहोस् https://bodybuiltlabs.co.uk/a/wsg/proxy/signup थप विवरणहरू लागि।
म कसरी जान्दछु कि तपाईका उत्पादनहरू वैध छन्?
सरमस्टोरमा हामी केवल वास्तविक र वैध उत्पादनहरू मात्र स्टक गर्छौं, हामी नक्कल बेच्दैनौं, त्यसैले तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको वस्तु वास्तविक छ। हामीसँग तेस्रो-पार्टी ल्याब परिणामहरू छन् जुन हाम्रो वेबसाइटमा छवि अनुभागमा उत्पादन पृष्ठमा पाउन सकिन्छ।
यद्यपि, यदि तपाईं आफ्नो वस्तुसँग पूर्ण रूपले खुसी हुनुहुन्न भने, तपाईंलाई पूर्ण फिर्ती फिर्ताको लागि हामीलाई फिर्ता गर्न स्वागत छ, जबसम्म उत्पादन खोलिएको छ।
के तपाईका उत्पादनहरू वैध छन्?
हाम्रा सबै उत्पादनहरू शुद्धताको लागि परीक्षण गरिएका छन् र नतीजाहरू हाम्रो वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ। यहाँ लिंक गरिएको: https://sarmsstore.co.uk/
के तपाईका उत्पादनहरूले काम गर्छन्?
हामी युरोपमा SARM को सब भन्दा ठूलो विक्रेता छौं हाम्रो उत्पादनहरू तपाईलाई प्राप्त गर्न सक्ने उच्चतम शुद्धता हुन्। हाम्रो वेबसाइट, ट्रस्ट पायलट र फोरममा हाम्रो समीक्षाहरूले तपाईंलाई केहि विश्वास प्रदान गर्नुपर्दछ।
के म फिर्ता केहि फिर्ता भने के तपाईं वितरण शुल्क फिर्ता?
होइन, हामी गर्दैनौं।
यदि मेरो फिर्ती गलत छ भने मैले के गर्नुपर्छ?
हामी तपाईंको दु: खी छौं, यदि हामीले तपाईंको फिर्तीको साथ गल्ती ग !्यौं भने हामी दु: खी छौं!
यदि यो मामला हो भने कृपया हामीलाई বিক্রয়@sarmsstore.co.uk मा प्रयोग गरी सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यथाशीघ्र यथाशीघ्र वर्गीकरण गर्ने प्रयास गर्ने छौं।
मैले किन मेरो फिर्ती प्राप्त गरेको छैन?
तपाईंएक पटक यो पूरा गरिसकेपछि रिफन्डले तपाईंको खातामा प्रक्रिया गर्न -5-१० कार्य दिनहरू लिन सक्दछ। कृपया हामीसँग सम्पर्कमा रहनु अघि यो आवंटित समयको लागि कुर्नुहोस्।
म बेलायतको ग्राहक हुँ, तपाईंले मेरो फिर्ती वस्तुहरू प्राप्त गर्नुभयो?
यसले सामान्यतया working कार्य दिनहरू लिन सक्दछ (सप्ताहन्त र बैंक छुट्टिहरू बाहेक) तपाईंको फिर्तीको मिति पछिको पछाडि, तपाईंको पार्सल हाम्रो गोदाममा पठाइन्छ र प्रक्रियामा जानको लागि।
हामी तपाईंलाई ईमेल पठाउँनेछौं कि हामीले तपाईंको रिटर्न प्राप्त गरिसकेका छौं, अर्को चरणहरूको जानकारी दिँदै।
तपाईंको फिर्ती नीति के हो?
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं सर्म्सस्टोरबाट आफ्नो खरीद मन पराउनुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाईं आफ्नो खरीदसँग नाखुश हुनुहुन्छ, वा यसले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने, तपाईं हामीलाई फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
आईटमहरू तिनीहरूका मूल अवस्थामा फर्काइनुपर्दछ र खोल्नुपर्दछ, तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको मितिको days० दिन भित्र। हामी तपाईंले तिर्नु भएको मूल्यका लागि पूर्ण फिर्ती प्रस्ताव गर्न सक्दछौं।
यदि तपाईं हामीलाई उत्पादन फर्काउँदै हुनुहुन्छ यदि यो गलत छ भने, हामी तपाईंको पोष्ट लागतहरू मात्र फिर्ता गर्न सक्दछौं यदि वस्तु हाम्रो पक्षमा त्रुटि मार्फत गलत हो र यदि यो गलत तरिकाले आफैं द्वारा क्रमबद्ध गरिएको थियो भने।
हाम्रो फिर्ताको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्: https://sarmsstore.co.uk/pages/refund-policy
के म PayPal प्रयोग गरेर भुक्तान गर्न सक्छु?
हाल हामी हाम्रो वेबसाइट को माध्यम बाट पेपैल स्वीकार गर्दैनौं।
तपाईं कस्तो प्रकारको भुक्तानी स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हामी सबै प्रमुख क्रेडिट र डेबिट कार्ड, साथ साथै बिटकइन स्वीकार्छौं।
के मैले भुक्तानी गर्न सक्छु जब म उत्पादन पाउँछु?
भुक्तानी तपाईंको खाताबाट लिईनेछ जब तपाईं अर्डर गर्नुहुन्छ।
छुट कोड किन काम गरिरहेको छैन?
कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि छुट डिस्काउंट कोडमा सही कोड इनपुट गर्नुभयो भने, तपाईंले यो अर्डरमा छूट थप्नु पर्छ जब यो सही रूपमा लागू गरिएको छ।
शिपिंगको लागि मैले कति तिर्नु पर्छ?
हामी विश्वव्यापी शिपिंग निःशुल्क प्रदान गर्दछौं। हामी एक सशुल्क सेवा प्रदान गर्दछौं जुन तपाईंको देशको भन्सार भत्ता र प्रतिबन्धहरूमा निर्भर गर्दछ, तपाईंको पार्सल चाँडै डेलिभर हुने ग्यारेन्टी गर्दछ।